Ma Dhabbaa In Haweenka Ku Nool Kenya Intooda Badan Caruurtooda Ku Dila Coca-Cola. - Awdinle Online
Ma Dhabbaa In Haweenka Ku Nool Kenya Intooda Badan Caruurtooda Ku Dila Coca-Cola.
December 2, 2019 (Awdinle Online) –Warbixin uu daabacay Wargeys ka soo baxa Ingiriiska ayaa lagu sheegay in hooyooyinka Kenya ay carruurtooda ugu dilaan Coca-Cola si ay nolosha u dhaafiyaan, sida lagu sheegay warbixin xuquuqda Aadanaha ah.
Hooyooyinkani waxay ku quudiyaan dhallaanka Coca-Cola ama biirka caleenta ah iyo cabitaanno kale oo jilicsan halkii ay caano siin lahaayeen, sababtoo ah ma doonayaan inay qaadaan mas’uuliyadda barbaarintooda, ayaa lagu yiri warbintan oo la diyaariyay todobaadkii lasoo dhaafay.
Vincent Odhiambo, oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa yidhi: “Haweenka qaar ma awoodaan inay qoys yeeshaan, oo waxay caan ka noqotay bulshada dhexdeeda in ilmaha la siiyo Coca-Cola taasoo keentay in ilmuhu ku dhintaan sadax maalmood gudahood. Tiro aad u badan oo dhallaanka ah ayaa xogta lagu hayaa inay ku dhintaan qashin-qubka ama wabiyada oo ay si joogto ah uga helaan goob-joogeyaasha iyo shaqaalaha.
Tirakoobka wali muu bixin qiyaasta tirada dilalka caruurta ee ku sugan bariga qaarada Afrika. Hase ahaatee Wilson Chiptu, oo ah qashin-qaade, wuxuu ka helaa qiyaastii 15 caruur ah oo dhintay sanadkasta qashin qubka halkaas oo uu ka wato meheraddiisa. Sida ku xusan warqadda, muddo hal toddobaad gudii ah bishii May, maydadka siddeed carruur ah ayaa lagala baxay biyihii qashinka ka buuxsamay ee Nairobi.
Warbixinta ayaa sidoo kale iftiimisay in haweenku ay iska soo tuuraan caruurta taasoo ah sababaha ugu badan ee keena dhimashada hooyada iyo dhalashada Kenya.
Ilmo soo rididda ayaa waliba khatar ku ah haweenka, sida lagu sheegay warbixinta, iyada oo toddobo haween ah ay dhintaan maalin kasta, sida laga soo xigtay Mary Stopes International, oo ah hay’ad samafal caafimaad oo dhanka haweenka ah. Illaa 350,000 oo haween Kenyan ah ayaa khatar ugu jira sannad kasta soo rididda ilmaha, iyadoo 21,000 oo haween ah loo dhigo isbitaal sannad walba taas darteed.
Shirkadda Coca-Cola, ayaa dhankeeda si dad ban u qirtay in cabitaankeeda uu awood u leeyahay inuu dilo caruruurta, taasoo ku tuseysa inuu halis weyn galinayo caafimaadka ama nolosha dadka waaweyn.
Afahayeen u hadlay shirkadda Coca-Cola ayaa yidhi: “Warbixinadii ugu dambeeyay ee ku saabsan dhimashada dhallaanka cusub ee Kenya waa walwal badan,” Waan ognahay in cabitaannada fudud ay nabdoon yihiin ayna ka heli karaan dad badan oo adduunka ah. ” Si kastaba ha noqotee, waxaa si buuxda loogu oggolaaday in caanuhu ay yihiin waxa dhallaanka u baahan oo dhan. ”
Cabitaanka Coca-Cola, ayaa waxaa aad loogu iibiyaa Soomaaliya iyadoo dadku ka cabaan maqaayadaha, meelaha macmacaanada iyo munaasabadaha.
Warbixinta xuquuqul insaanka ayaa xaqiijinaya burburka nidaamka anshaxa ee Kenya inuu aad usii batay, kaas oo kordhinaya dambiyada, rabshadaha iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha.
Dadka Kenya ayaa waxaa ku socda dabar go’ badan waxaana maalin walba muwaadiniintooda ka dhintaahi ay laba jibaar ka badan yihiin kuwa ku dhinta Soomaaliya
Previous articlePuntland:-Ciidamo ka tirsan Puntland oo isku dhiibay Somaliland Majirto.
Next articleMa Jiraan Calaamado Lagu Ogaan Karo Dhiikarka !